न्युयोर्क सिटीमा आजरातीदेखि कर्फ्यु : के गर्न मिल्छ ? के मिल्दैन ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
न्युयोर्क सिटीमा आज राती ११ बजेदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । भोलि विहान ५ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले जनाएका छन् । यसैबीच न्युयोर्कका मेयर बिल ब्लाजिओले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै औपचारिक रुपमा कर्फ्युको घोषणा गरेका छन् ।
कर्फ्यु जारी भएको समयमा कुनै पनि व्यक्ति वा गाडी सार्वजनिक स्थलमा उपस्थीत हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसैले आज राती ११ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा सवारी साधन न्युयोर्क सिटीभर सार्वजनिक स्थलमा जान पाउनेछैनन् ।
तर यो आदेश प्रहरी अधिकारीहरु, शान्ति अधिकारीहरु, अग्नी नियन्त्रक, मेडिकल प्राविधिकहरु, अत्यावश्यक काममा जाने र फर्कनेहरु, होमलेसहरु र औषधी तथा उपचारका खोजीमा रहेकाहरुका सन्दर्भमा लागु हुनेछैन ।
कर्फ्यु आदेशसँगै न्युयोर्क सिटीमा सडकमा प्रहरी परिचालन पनि दोब्बर पारिने भएको छ । गएराती ४ हजार प्रहरी परिचालन गरिएकोमा सोमबार राती ८ हजार बनाइने भएको छ ।
प्रहरी हिराशतमा एकजना अश्वेत व्यक्तिको मृत्युको घटनालाई लिएर अमेरिकाभर प्रदर्शन भइरहेको छ । न्युयोर्कमा पनि प्रदर्शन हिंश्रक बन्दै गएपछि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको हो ।
आइतबार राती न्युयोर्कको बु्रकलिन क्षेत्रमा हिंश्रक प्रदर्शन भएको थियो । तल्लो म्यानहटन र डाउनटाउन बु्रकलिनमा प्रहरी परिचालन बढाइने भएको छ ।
गएराती भएका प्रदर्शनमा न्युयोर्कमा कम्तीमा ४ सयजनालाई पक्राउ गरिएको छ । मुठभेडमा केही प्रहरी अधिकारीहरु घाइते समेत भएका छन् । झण्डै दर्जन प्रहरीका गाडीमा क्षति पुर्याइएको छ ।